प्रयोगकर्ता अन्तर्क्रियाको भविष्य: टचस्क्रिनबाहिर | Martech Zone
बाट यो इन्फोग्राफिक स्मार्ट स्मार्ट टचस्क्रिन बाहिर प्रयोगकर्ता इंटरफेस को भविष्य छलफल गर्दछ। सायद सब भन्दा उन्नत प्रयोगकर्ता इन्टरफेस म आज मेरो एप्पल वाच प्रयोग गरीरहेछु। बहु-स्पर्श, दबाव, बटन, र डायलहरूको संयोजन जटिल छ। र मेरा ठूला औलाहरूका साथ, यो सँधै सिमलेस अनुभव हुँदैन। म भविष्यको बारेमा उत्साहित छु!
भविष्य प्रयोगकर्ता अन्तर्क्रिया र ईन्टरफेस
स्मार्ट स्मार्ट केही टेक्नोलोजीहरू आइटममाइज गर्दछ जुन प्रयोगकर्ता अन्तर्क्रिया परिवर्तनको कगारमा छ:
होलोग्राफहरू - माइक्रोसफ्ट पहिले नै शिपिंग छ होलोलिन्स र विकास ईन्टरफेस खोलिएको छ। एलोन मस्कले केहि प्रदर्शन गरेको छ होलोग्राफिक ईन्टरफेसको उदाहरण साथै।
जैविक प्रकाश-उत्सर्जक डायोडहरू (OLED) - हामीसँग हालै सपाट र मध्यम घुमावदार, तर कठोर, ट्याब्लेटहरू, ल्यापटप र स्क्रीनहरूमा इन्टरफेस छ। यद्यपि OLED टेक्नोलोजी लचिलो ईन्टरफेसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। भविष्यको कल्पना गर्नुहोस् जहाँ तपाईं स्मार्टफोन कुनै पनि डेस्कटप कम्प्युटर जत्तिकै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, र तपाईं कफी शपमा बस्न र अनरोल र तपाईंको inch० इन्च स्क्रिन अनफोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। वा हुनसक्छ यो तपाईंको कपडामा सिधा बनाइएको छ!
ब्रेन वेभ अन्तर्क्रिया - वर्षौंदेखि, चिकित्सा अनुसन्धान हाम्रो स्नायु प्रणालीको साथ अन्तर्क्रिया राम्रो ट्युन गर्दै छ। सबैभन्दा नयाँ प्रोस्थेटिक टेक्नोलोजी, शक्तिशाली पोर्टेबल कम्प्यूटिंग टेक्नोलोजी द्वारा सक्षम गरिएको छ, वेगमा प्रतिक्रिया गर्दछ जुन मेकानिकल अन्तर्क्रियामा दिमागका लागि उपयुक्त छ। नयाँ उपकरणहरू, जस्तै भावना, बाह्य अनुप्रयोगहरूको साथ इन्टरफेस वास्तविक मस्तिष्क छालहरूमा ट्याप गर्न इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी (EEG) पत्ता लगाउनुहोस्।
केवल प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस वा अन्तर्क्रियामा मलाई विश्वास छ कि इन्फोग्राफिक याद आउँछ आवाज मान्यता। यो पहिले नै मुख्यधारा हुँदै गइरहेको छ, भ्वाइस कमाण्डको भविष्य निकट भविष्यमा धेरै उत्कृष्ट हुने छ।
र आज पनि, हाम्रो अमेजन इको भोकल आदेशहरू पहिचान गर्न र सहि प्रतिक्रियामा एकदम अभूतपूर्व हो। मेरो विचारमा, यो एपलको सिरी जस्तै आवाज मान्यता भन्दा धेरै राम्रो छ।
टैग: मस्तिष्कमस्तिष्क तरंग पहिचानभावनात्मकहोलोग्राफholographic इंटरफेसhololensमानसिक नियन्त्रणओलम्पिकजैविक प्रकाश-उत्सर्जक डायोडहरूटच स्क्रिनटचस्क्रीनप्रयोगकर्ता अन्तर्क्रियाप्रयोगकर्ता इन्टरफेस
एक ब्रान्ड के हो?